Android Samba Mutengi: Google mutengi kugovera mafaera neWindows | Linux Vakapindwa muropa
Google yakatanga Android Samba Mutengi yeiyo Andy yekushandisa system. Kubatana pakati pemidziyo yenharembozha uye makomputa edesktop kuri kuwedzera kufarira, isu tatoona kuedza kwakaitwa neMicrosoft, chirongwa chakakundikana cheCanonical kuzviitawo neUbuntu, kana kufarira kwaApple kukwidziridza machipisi emidziyo mbozha uye kuunza iyo IP Pro kune izvo zvinopihwa nelaptop sezvatakamboona mumatanho eTV munguva pfupi yapfuura.
Android Samba Client haisi tekinoroji yekubatana zvakadaro, iwe unofanirwa kunge uchitoziva iro rakakurumbira Samba chirongwa chinotendera mafaera kugovaniswa pamusoro penetiweki pakati peUnix neWindows-senge anoshanda masystem eakasiyana manetwork. Asi, zvazvinoita kubatana kuunza mafaira atinawo kuchikwata chedu pamwe chete Windows kuitira kuti dziwanikwe manejimendi kubva kune chero chinhu cheApple uye ichi Google app, ingave iri smartphone kana piritsi.
Chimwe chinhu chakataurwa zvakare nezve kusangana uko Google kuri kutsvaga, asi chero zvingave zviri pakati Android uye yayo ChromeOS yeakakurumbira uye akabudirira ChromeBook. Pakave nemakuhwa mazhinji pamusoro pazvo, asi chokwadi ndechekuti ivo vane domeini mune nharembozha, asi kwete mudesktop iro rinotongwa neWindows, nekudaro, rinofanirwa kungogumira mukugadzira iyi nzira yekutaurirana panzvimbo yekubatana « native »...
Iyo Anwendung yakanaka chaizvo, uye iwe unongofanirwa kuitora kubva pa Google Play Store uye kana waiswa iwe unogona kuisa iyo faira server nzira pamwe nephasiwedi kuti uzarure hwindo nemafolda aunayo paPC yako. Mutengi weGoogle Samba anotendera iwe kuona, kugadzirisa uye kudzima mafaera. Saka kana iwe ukashandisa Windows makomputa uye iwe unofanirwa kugovana mafaera ako uye maforodha pane ako eApple zvishandiso, ichi chirongwa chakanaka chayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Android Samba Mutengi: Google mutengi wefaira rekugovana neWindows
Zvakanaka, kana iwe uchida kusangana, edza plasma 5 neKdeconnect. Kubatana kwakaringana pakati pe smartphone yangu ne laptop yangu neMageia 6 RC, manejimendi manejimendi kubva kune imwe kifaa kuenda kune imwe, multimedia control inoita iyo smartphone kure kure, kana kure kure inoshanda sembeva.
Inokwanisa mukuwedzera pakuratidza zviziviso zvefoni, zvese whatsapp, mafoni, mameseji, tsamba, nezvimwe.
Ndanga ndichiishandisa kubva pandasangana nayo uye zvinoshamisa.